NgoNovemba 2020 - Iphepha le-2 le-27 - Funda ukuRhweba
I-Bitcoin kwiRally njengeKhandlela leVeki eliSondele
I-Bitcoin (i-BTC) irekhode isikhuthazi esikhuthazayo kwisithuba seeyure ezingama-48 ezidlulileyo, njengoko iinkunzi zeenkomo zijolise ekubuyiseleni i-rally yenkomo kumkhondo kulandela ukuthengiswa kweentengiso ngokubanzi.
Okwangoku, umkhombandlela olandelayo uya kuba sisitshixo sokujonga ukuba ukuvalwa kwekhandlela leveki kusondela ngokukhawuleza. Inqaku lokuvalwa kwekhandlela leveki nganye liya kuthi libeke ithoni kwiveki ezayo kwaye libonelele ngombono weBitcoin macro. Oko kwathiwa, iinkunzi zeenkomo zinomsebenzi wokugcina i-uptrend yangoku kude kube sekupheleni kwekhandlela.
Ngaphezu koko, kusekho amanqanaba ambalwa abalulekileyo okuphuka ngaphambi kokuba iBitcoin ibone naluphi na unyuko. Okwangoku, i-BTC ithengisa kufutshane ne-18,500 XNUMX yeedola. Ukuphendula kwayo kweli nqanaba kuya kubonelela ngengqondo ye-cryptocurrency yexesha eliphakathi.
Kwezinye iindaba, amahlakani eGuggenheim, yenye yezona mveliso zinkulu zotyalo-mali kunye neengcebiso, uthathe umdla omkhulu kwi-BTC kunye nezicwangciso zokutyala imali eninzi kwi-cryptocurrency. Ngokugcwalisa, inkampani iceba ukutyala imali eyi-10% yeeasethi zayo kwi-BTC ngokusebenzisa iGreycale.
Nge-Guggenheim ekucingelwa ukuba ine- $ 5 yezigidigidi kwimpahla ephantsi kolawulo, i-10% yokuthengwa kweeasethi iguqulela kwi- $ 500 yezigidi zeprojekthi.
Ukuba / xa oku kuthengwa kwehla, sinokulindela i-rally ebukhali kwi-Bitcoin kwiintsuku ezilandelayo.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela-nge-29 kaNovemba
I-Bitcoin iqale kwakhona kwi-push yayo yokuqhubela phambili, njengoko ihamba ngendlela encinci, ekhokelela kumgca wokuqala. I-bias yethu ihlala igxilwe kwicala elikhuselayo, njengoko abathengi abaninzi beza ebhodini ngokujonga ukubonelelwa kwe-BTC ngoku ejikeleza intengiso.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 18,500, $ 18,800, kunye ne- $ 19,000. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 17,635, $ 17,200, kunye ne- $ 17,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 546 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 339 billion
Ulawulo lweBitcoin: 62%
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): I-Ether Bulls Thenga iiDiphu, uphinde uphinde ubuye umva ngeXesha eliPhezulu
Umgangatho we-ETH uphezulu kwaye waphula uluhlu lwamaxabiso lwangoku lwe- $ 480 kunye ne- $ 520
Iinkunzi ze-Ethereum zithenga idiphu ngo-Novemba wama-26 kwaye ziphinde ziqhubeke ngamandla
I-Ethereum (ETH) yezibalo zangoku
Ixabiso langoku: $ 567.76
Intengo yeNtengiso: $ 64,514,961,747
Umthamo wokuThengisa: $ 14,304,766,539
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 280, $ 320, $ 360
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 160, $ 140, $ 100
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Novemba 29, 2020
Nge-26 ka-Novemba, u-Ether wagxalathelana ukuya kwi-485 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo zithenga iidiphu zokuphinda ziqhubeke ngamandla. Iziphatho zezibane ngoNovemba 26 zazibonisa ubude beemisila ezahlukeneyo. Le misila mide ibonisa ukuba kukho uxinzelelo lokuthenga kwinqanaba lamaxabiso asezantsi. Eyona altcoin inkulu ithengisa nge- $ 556 ngexesha lokubhalwa. Ukubuyela kwakhona kwi- $ 620 yokuphikisa ngaphezulu kunokwenzeka.
Ixabiso liphule ngaphezulu komgca wokumelana wesitishi esinyukayo. Oku kubonisa ukunyuka okuphezulu kwengqekembe. I-Ether ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu.
I-Ethereum inyukela phezulu njengoko isondela kwinkcaso kwi-620 yeedola. Ngomhla kaNovemba 28 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-78.6% yeFibonacci. Oku kubuyiselwa kwakhona kunika umbono wokuba i-uptrend iya kuqhubeka inyuka kodwa ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci. Lelona liphezulu $ 558.13. Nangona kunjalo, isenzo sentengo sidlulile kwelo nqanaba.
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na i-asethi eyimali okanye ungeniswe imveliso okanye isiganeko. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
I-US Wall Street 30 (US30USD) ikwi-Uptrend, kunzima ukuPhula iNqanaba 30000
I-Wall Street yase-30 e-US ithengisa ngaphantsi kwenqanaba lama-30000. Ngomhla we-10 kuNovemba nge-uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso. Eli linqanaba eliphezulu le-31114.40.
Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge phezulu. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-62 lexesha le-RSI 14. Imakethi ikwindawo ephezulu kwaye ingaphezulu kwe-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikwiwadi ephezulu yokuhamba. NgoNovemba 24 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Oku kubonisa ukuba isalathiso sinokunyuka kwaye sifikelele kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Lelona nqanaba liphezulu le-30884.70.
I-US30USD ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Ii-SMAs zitshibilika ziye phezulu zibonisa inkqubela yangaphambili.
Isalathiso se-US30USD kukunyuka okuphezulu. Kuyasokola ukwaphula inqanaba lama-30000. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuphakama kwaye ibuyele umva kwinqanaba le-1.272 yolwandiso okanye kwinqanaba 31114.40.
I-GBPUSD inokwandisa ukuhla kwayo kwiKota ePhambili ukuya kwiNqanaba le-1.3200 phakathi koxinzelelo lweBrexit
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-nge-29 kaNovemba
I-GBPUSD yangena ngaphantsi kwenqanaba le-1.3300 kwiseshoni yangaphambili apho yayivale khona. Esi sibini siphulukene nomdla wokuya ngasekupheleni kweveki njengoko ukuphelelwa lithemba kukaBrexit kunye noxinzelelo zinegalelo kububi babo. Ukungabikho kwenkqubela phambili kwiintetho kuye kwalimaza ibango le-sterling.
Amanqanaba okumelana: 1.3514, 1.3400, 1.3350
Amanqanaba enkxaso: 1.3260, 1.3106, 1.2881
I-GBPUSD ilahlekile i-bullish traction yayo ejikeleze i-1.3400 kodwa isekude kwi-bearish. Kwitshathi yemihla ngemihla, esi sibini siyaqhubeka ukuqhubela phambili ngaphezulu komndilili oshukumisayo we-13, obonelela ngenkxaso ebuthathaka kwi-1.3260, ngelixa izikhombisi zobuchwephesha ezinje nge-RSI ziyancipha kumanqanaba amahle kwaye zinokuhla ziye kwinqanaba le-1.3200.
Kwimeko ebanzi, ekujolise kuko kuhlala kwinqanaba eliphambili lokumelana ne-1.3514. Ukuqhawulwa okuzinzileyo kweli nqanaba kufuneka kukhatshwe kukuqhubeka kokurhweba ngaphaya komndilili ohambahambayo, okhoyo ngoku kwi-5. Oku kuya kungqinisisa ezantsi kwekota esezantsi ngo-1.3350. Nangona kunjalo, ukuphambuka kwi-1.1409 kuya kugcina ukuvakala kwexesha eliphakathi kolunye uhla olungezantsi kwe-1.3514 kamva.
Ukunyuka kwe-GBPUSD ukusuka kwi-1.2675 kuyaqhubeka ukuya kwi-1.3397 kwiveki ephelileyo kodwa kwabuya umva. Umkhethe wokuqala awuthathi cala kule veki. Kwelinye icala, emva kwenqanaba lokumelana ne-1.3400, isibini sinokujolisa kwi-1.3514 ephezulu. Ukophulwa kwesigqibo esikwinqanaba eliphezulu le-1.3514 kuya kuqala i-rally ngokubanzi ukusuka kwi-1.1409.
Nangona kunjalo, enye i-rally eqikelelweyo ye-61.8% ukusuka kwi-1.1409 ukuya kwi-1.3514 amanqanaba kufuneka ibonwe ukusuka kwi-1.2675 kwinqanaba elilandelayo le-1.3957. Kwelinye icala, ikhefu lesitshixo se-1.3177 senkxaso inokuguqula ukubuyela umva kwicala eliphantsi ukuze kwandiswe uluhlu ukusuka kwi-1.3514 ngomnye umjikelo wokuhla.
Ukulahla kwe-GBPJPY phantsi kweNqanaba le-139.00 njengoko ukungaqiniseki kweBrexit kuyaqhubeka nokwenzakalisa ipound Sterling
I-GBPJPY ijongene noxinzelelo lwabathengisi njengoko ihlala ixinezelekile phantsi kwenqanaba le-139.00 kwaye iphele iseshoni yangaphambili kwimimandla ejikeleze imimandla eyi-138.28. Ukulahla isibini emva kokulinganiswa kukungaqiniseki okuqhubekayo malunga nothethathethwano lweBrexit olongeza uxinzelelo olubi kwisikali seponti.
Amanqanaba okumelana: 142.71, 140.31, 139.74
Amanqanaba enkxaso: 138.38, 137.50, 134.40
Njengoko kubonisiwe kwitshathi yemihla ngemihla, esi sibini siyikhuphile inkxaso kwi-138.38 kumgca othe tyaba ukusuka nge-9 kaNovemba. Amanqanaba e-138.00 kunye ne-137.20 amanqanaba (ngoNovemba 19 asezantsi) anokugxilwa apha ngezantsi. Kwelinye icala, ukuxhathisa kwangoko kuku-139.74 nangaphezulu, kwi-140.31 (nge-Nov 11 ephezulu).
Kwimeko yexesha elide, ukuphambuka kwindawo yokumelana ne-140.00 kubonisa imeko ye-bearish yexesha elide emnqamlezweni. Nangona kunjalo, ukuqhawuka okuzinzileyo kwenqanaba lokumelana ne-143.31 kungayenza buthathaka le mbono kwaye kungavula ezinye izibonelelo ukuya kwi-144.95 (ngoFebruwari 2020 ephezulu).
I-GBPJPY iphinde yabuya ngamandla kwiveki ephelileyo kodwa yahluleka ukophula inqanaba lokumelana ne-140.31. Umkhwa wexesha elifutshane uxubekile kwaye i-bias yokuqala ihlala ingathathi hlangothi kule veki. Kwelinye icala, ikhefu le-140.31 linokuphinda liqhubeke kwakhona kwi-133.04 kwaye ijolise kwi-142.71 ephezulu.
Kwelinye icala, ikhefu kwinqanaba le-137.20 linokubonisa ukuba imeko esuka kwi-142.71 iqala isigaba esitsha sokwehla. Ukuhamba ngemini yangaphakathi kungabuyela umva ezantsi ukuya kwinkxaso kwi-134.40 kwaye kungaphantsi.
I-FTSE 100 (UKX) yoBuso bokwaliwa kodwa idibanisa ngezantsi kwinqanaba le-6400
I-FTSE 100 ikwintshukumo ephezulu ukusukela ngoNovemba 2. Isabelo sifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso. Ngomhla kaNovemba 16 no-25, izibane zezibane zinama-wick amade. Ezi zibane zibonisa ukuba kukho uxinzelelo lokuthengisa olomeleleyo kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso. Isabelo sinokuwela.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-65 le-Index yamandla ahlobene. Iimarike zikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu kwe-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo sikukunyuka okuphezulu. Nangona kunjalo, imarike ifikelela kwingingqi ethengiweyo. Ngomhla kaNovemba 11 phezulu; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Oku kuchaza ukuba isabelo sinokufikelela kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci kunye nokubuyela umva. Eli linqanaba eliphezulu le-6620.30.
Itshathi ye-UKX 4 yeyure
Isabelo singaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) ngoku siyenyuka kodwa sijamelene noxinzelelo lokuthengisa olomeleleyo kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso. Isixhobo seFibonacci sibonisa ukuba isabelo sifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso. Isabelo sidibanisa ngezantsi kwinqanaba lama-6400.
I-NZD / i-USD ithengisa kwindawo ethengisiweyo, iNqanaba leThagethi 0.70679
Amanqanaba okuGxila aphambili: 0.6600, 0.6800, 0.7000
I-NZD / i-USD inyukele phezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-0.6800. Ukuchasana kwinqanaba le-0.6800 kwaphuliwe. I-Kiwi iqhubekile nokunyuka kwaye isondela kwinqanaba eliphezulu le-0.7000.
I-Kiwi inyukele kwinqanaba lama-75 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aBonisa isiQinisekiso sexesha se-14. Ibonisa ukuba isibini ngoku sikwindawo ye-uptrend. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambekele phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-NZD / USD sikwihambo ephezulu. Esi sibini siye senyuka senyuka ukusukela nge-30 ka-Okthobha. Kwi-uptrend yangoku, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba le-61.8% yeFibonacci. Oku kunika umbono wokuba imakethi iya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-1.618 yeFibonacci. Lelona nqanaba liphezulu le-0.7067.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngaphezulu. Ibonisa ukuba uptrend wangaphambili. Isibini singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu.
Isibini se-NZD / USD siqale kwakhona ukunyuka okuphezulu. Imarike ithengisa kwindawo ethe kratya yentengiso. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuwa kwaye ifikelele kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci kwinqanaba lokuphinda ubuye okanye i-0.70679 ephezulu.
I-USD / JPY yenza uthotho lweendawo eziphantsi kunye nezantsi, inokufikelela kwinqanaba le-102.39
Ukuhlaziywa: 28 Novemba 2020
Amanqanaba okuGxila aphambili111.000, 112.000, 113.000
Amanqanaba enkxaso aphambili104.000, 103.000, 102.000
I-USD / JPY yeXabiso lexesha elide iTrend: Bullish
Isibini se-USD / JPY besisezantsi ukusuka ngoJuni. Ixabiso lenze uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Nge-18 kaNovemba, ezantsi, isibane esibuyiselweyo savavanya inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kweFibonacci 61.8%. Ibonisa ukuba iYen iya kuqhubeka nokuhla iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Olo lusezantsi lwe-102.39.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla. Esi sibini siwele kwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Oku kubonisa ukuba i-Yen ikwi-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba phantsi. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kuNovemba ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-27%. Oku kubonisa ukuba i-Yen iya kuwa kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci kwinqanaba lokubuyisela. Ngamanye amagama, esi sibini siya kufikelela kwinqanaba le-1.618.
Isibini se-USD / JPY okwangoku singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwi-bullish umfutho kwaye siyarhweba kwingingqi ethe kratya yentengiso. Ii-SMAs zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Okwangoku, i-USD / JPY yenza iindawo eziphantsi nezisezantsi. Okwangoku, kukuhla okuye ezantsi. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, iYen iya kuwela kwinqanaba le-1.618 okanye kwinqanaba le-103.67.
Ukusebenza kweQhinga lokuSebenzisa uMngcipheko kwiQhinga lokuSebenzisa uMrhwebi Wonke uMrhwebi kufuneka alumke
Ulawulo lomngcipheko sisihloko esibalulekileyo xa kufikwa kurhwebo lwe-forex. Wonke umrhwebi we-forex ufuna ukunciphisa ilahleko kunye nokwandisa inzuzo kurhwebo ngalunye.
Abarhwebi abaninzi balahlekelwa yimali kungenxa yokuswela ulwazi okanye abanamava kwintengiso, kodwa ngenxa yolawulo lomngcipheko olubi.
Isicwangciso esiliqili sokulawula umngcipheko sibalulekile ukuba ufuna ukuba ngumrhwebi ophumeleleyo. Funda kunye nokuqonda ezinye zeengcebiso zokunciphisa amava akho orhwebo.
Qonda iMarike ye-Forex
Imarike yorhwebo lwangaphandle ibandakanya iimali ezivela kwihlabathi liphela. Iqhutywa yimikhosi yemfuno kunye nonikezelo. I-Forex MetaTrader Ukurhweba kusebenza njengalo naluphi na urhwebo apho ufumana i-asethi ngokutshintsha imali. Ixabiso lentengiso limisela ukuba yimalini ekufuneka ithengiwe ngemali eyahlukileyo. Imali yokuqala ebonakala kwikowuteshini yotshintshiselwano lwangaphandle yaziwa njengemali esisiseko.
Imali yesibini, kwelinye icala, ibizwa ngokuba yimali yesilinganiso. Ixabiso elivela kwitshathi lihlala liyimali yokucaphula. Ibonisa isixa semali esiza kuthi sichithe ukuthenga elinye icandelo lemali esisiseko.
Umzekelo, ukuba inqanaba lotshintshiselwano nge-GBP / iUSD yi-1.25000, uyakufuna i-1.25 yeedola ukuthenga i- $ 1. Zintathu iintlobo zentengiso yotshintshiselwano lwangaphandle, njengoko siza kubona ngezantsi.
• Indawo yentengiso. Kulapho ke utshintshiselwano lwemali yokwenyani lwenzeka kwindawo enye, apho urhwebo lwenziwa khona, kulapho kanye.
• Imarike yexesha elizayo. Kule meko, kwenziwa ikhontrakthi yokuthengisa okanye yokuthenga isixa esithile semali ngomhla othile nakwixabiso elizayo. Ikhontrakthi yexesha elizayo ihlala ibopha ngokusemthethweni.
• Phambili ukuthengisa. Apha, kwenziwa isivumelwano sokuthengisa okanye ukuthenga imali ethile kwixabiso elithile ngomhla ekuvunyelwene ngawo. Oku kunokwenzeka kwixesha elizayo okanye ngaphakathi kwemihla ezayo.
Amaqhinga okuLawula umngcipheko wokuthathela ingqalelo
• Sebenzisa iLast Loss
Isixhobo sokulahleka kokumisa sisixhobo esibalulekileyo esivumela abarhwebi ukuba bakhusele urhwebo lwabo ukusuka ekuguqukeni kweemarike ngesiquphe. Abarhwebi banokubeka ixabiso elichazwe kwangaphambili apho urhwebo lwabo luya kuvala ngokuzenzekelayo.
Masicinge ukuba umrhwebi uvula indawo kwindawo yentengiso ye-MetaTrader kwaye siqinisekile ukuba i-asethi iya kunyuka ngexabiso. Endaweni yoko, i-asethi iyehla kwixabiso ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Umrhwebi kwesi sikhundla akufuneki akhathazeke kuba xa iasethi ibetha ixabiso labo lokulahleka, urhwebo luvaleka ngokuzenzekelayo ukuthintela ilahleko enkulu.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba isicwangciso-nkqubo sokulahleka kokuyeka asisiqinisekiso. Ngamanye amaxesha xa imarike ingalindelekanga kwaye ibonisa izithuba zamaxabiso. Kule meko, ukulahleka kokuyeka akunakunyanzeliswa kwinqanaba elicwangcisiweyo. Endaweni yoko, iya kuqalwa ngexesha elizayo xa ixabiso libetha kwelo nqanaba. Oku kwenzekayo kubhekiswa njengokutyibilika.
Abarhwebi kufuneka baqinisekise ukuba ilahleko yokumisa ikwinqanaba apho ilahleko yabo ingayi kuba ngaphezulu kwe-2% yemali eseleyo yorhwebo kulo naluphi na urhwebo. Xa wenza ukuba ilahleko yakho iyeke ukuphepha ukwandisa umda welahleko. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokurhweba nge-forex. Umrhwebi ngamnye ubeka ilahleko yokumisa ngokuxhomekeke kumava kunye nobuntu babo. Nazi iindawo zokumisa eziqhelekileyo omele wazi.
• Ukuma kokungazinzi
• Indawo yokuma kwiindawo zokulingana
• Indawo yokumisa imida
• Ukumiswa kwetshathi okanye uhlalutyo lobugcisa
Sebenzisa i Thatha Thatha iNzuzo ukukhusela iinzuzo zakho
Thatha inzuzo iyafana nelahleko yokumisa. Ngokungafaniyo nelahleko yokumisa evala urhwebo ngokuzenzekelayo ukunqanda ilahleko engaphezulu, inzuzo ithatha ukuthengisa xa ifikelela kwinqanaba elithile lenzuzo. Ukuchaza izinto ozilindeleyo kurhwebo ngalunye kukuvumela ukuba usete injongo kunye nokuqinisekisa ukuba umisela inqanaba elifanelekileyo lomngcipheko kurhwebo.
Cinga ngamazinga enzuzo ojolise kuwo kunye nenqanaba lelahleko onokuyinyamezela. Ukwenza njalo kunceda ukuba uhlale uqeqeshwe kwaye ujonge umvuzo ngokuchasene nomngcipheko ngelixa urhweba.
Isicwangciso esisebenzayo solawulo lomngcipheko sikuvumela ukuba ulawule ilahleko kunye neenzuzo. Phanda ngokubanzi kwaye uzame iindlela ezahlukeneyo kwiakhawunti yedemo ukumisela eyona ilungele iimfuno zakho.
tags Forex, FX, Ulawulo lwengozi
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 27 abaDala izithuba →